ओ’लीको आ*क्रमक भाष’ण दे’उवा, प्र’च*ण्ड र नेपाल’माथि ह’म*ला, ‘मलाई बौ’ला कुकुरले टो’केको छ र ? Pm Oli Speech (भिडियो हेर्नुहोस) - Nepali in Australia
ओ’लीको आ*क्रमक भाष’ण दे’उवा, प्र’च*ण्ड र नेपाल’माथि ह’म*ला, ‘मलाई बौ’ला कुकुरले टो’केको छ र ? Pm Oli Speech (भिडियो हेर्नुहोस)
June 28, 2021 autherLeaveaComment on ओ’लीको आ*क्रमक भाष’ण दे’उवा, प्र’च*ण्ड र नेपाल’माथि ह’म*ला, ‘मलाई बौ’ला कुकुरले टो’केको छ र ? Pm Oli Speech (भिडियो हेर्नुहोस)
ओलीको आ*क्रमक भा’षण देउवा, प्र’चण्ड र नेपा’लमाथि हम*ला, ‘मलाई बौ’ला कुकुरले टो’केको छ र ? Pm Oli Speech (भिडियो हेर्नुहोस)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाललाई आफुले प्रधानमन्त्रीका लागि अफर नगरेको स्पष्ट गरेका छन्। मदन भण्डारीको ७० औं जन्मजयन्तीका अवसरमा सोमबार बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो कुनै अफर नगरेको खुलासा गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ, ‘मलाई बौला कुकुरले टोकेको छ र, कोहि नपाएर माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्न ? ओलीले माधवले भ्रम फैलाएको बताउँदै भने. ‘ एउटा कार्यक्रममा माधवले भनेछन् कि मैले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखे अरे।
मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखे तर म मान्दिन, म शेरवहादुर देउवाप्रति यति समर्पित छु । मेरो यति निष्ठा छ । म देश, पार्टीलाई धोका दिन्छु तर शेरवहादर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन धोका दिन्‍न। । यतिसम्म पनि मान्छे पतन हुँदा रहेछन् ।’
ओलीले भने, ‘आफ्नो सरकार ढाल्ने, कम्युनिष्ट आन्दोलन सिध्याउने, विपक्षी पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हिँड्ने, अनि नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता भन्ने । यस्तो लाजशरम पचेको मान्छेको चर्चा गर्नुनै बेकार छ।
प्रधानमन्‍त्री ओलीले माधव नेपाल नेपाली कांग्रेसको सामान्य कार्यकर्ता बनेको आरोप पनि लगाए। आफ्नो सरकार ढाल्ने र कम्युनिष्ट आन्दोलन सिध्याउने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाल लाजशरम पचेको मान्छेको संज्ञा पनि दिए। केहीदिन अघि माधव नेपालले सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूलाई प्रधानमन्‍त्री अफर आएको बताएका थिए
१४ बर्षमा नै चर्चित बनेकी तेरिया मगर यति ठुली भईन, मुम्बई बस्छिन् लाखौ कमाउछिन (हेरौ तस्बिर)
भर्खरै ओलीको यस्तो घोषणा: आक*स्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै नयाँ निर्णय सार्वजनिक, ( भिडियो हेर्नुहोस )
शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको रुपमा संसदबाट बिश्वासको मत नपाए के हुन्छ? फेरि को बन्ला प्रधानमन्त्री?
१० दिनमै मन्त्री पद गुमेका दिपक मनाङे भन्छन – मुभी हेरेर बसिरहेको छु